Ilkaha Cadayo - 1177
Borsta tänder - somaliska
Maalintiiba laba jeer
Jeermiska afku waxa uu sababi karaa dalool ama suuska ilkaha, iyo Infection cirridka ah, labadaba. Sidaas darteed waa ay fiicantahay in aad caadaysato cadayashada laba jeer maalintiiba, quraacda ka dib iyo cuntada ugu dambaysa habeenkii. Isticmaal burush-caday/ rumey jilicsan oo is haysta iyo dawo ilkood oo hal ilaa laba centimitir ah. Waa muhiim in ay dawada ilkaha ku jirto maaddada flour ee xoojisa ilkaha.
Ka soo bilow xagga ugu dambaysa
Bilawga cadayashada wuxu qofku leeyahay tamarta ugu badan. Sidaas darteed ku bilow meelaha ay ugu adagtahay in la gaadho, tusaale ahaan xagga ugu dambaysa daanka hoose. Markaa waxa ay noqonayaan xiitaa ilkaha ay ugu adagtahay gaadhidoodu qaar nadiif ah.
Sax u cadayo
Huurada wuxu badiyaa ku yaal darafyada cirridka iyo ilkaha dhexdooda:
Qallooci burushka-cadayga si gaska ugu sarreeyaa u gaadho ilaa darafka cirridka ilkaha. Hore iyo gadaal oo dhinac dhinac ah iyo dhaqdhaqaaq aad u yaryar u marmari burushka ilig ilig. Cadayo dhinaca gudaha, dhinaca dusha iyo korkaba.
Marka dhinaca gudaha ee ilkaha hore ee daanka sare iyo daanka hoose la cadayayo, dabada cadayga toos ayaa laga dhigayaa. Fiiri in burushka cadaygu gaadho cirridka ilkaha. Xoog ha ugu cadaadin cadayga ee dhaqdhaaq yar u wada mar kasta.
Cadayashada oo dhami waa in ay qaadato qiyaastii 2 daqiiqo.
Ku shaandhee dawada-cadayga
Waxtarka maaddada flour waxay fiicnaanaysaa haddii dawada-cadayga lagu shaandheeyo ilkaha dhexdooda dabadeedna biyo yar uun afka lagu dhaqdhaqo.
Buruska-cadayga ee korontada
Waxa jira burushyo-caday koronto ah oo badan oo kala duduwan. Nooc ka mid ah burushyada cadayga korontada ah ayaa la arkay in uu u tirtirayo huurada jeermiska si ka fiican sida burushyada cadayga ee caadiga ah. Waa nooca leh madax burush oo goobo ah oo wareegaya, sida runta ah madaxa burushku wuxu si dhakhso ah ugu dhaqdhaqaaqayaa hore iyo gadaal qaab goobo nuskeed ah – noqnoqod. Waa in qofku iskii u miisaamo cadaadiska burushka cadayga ee ilkaha korkooda isla markaana uu burushka hab nadaamsan ugu dhaqdhaqaajiyo ilig ilig sida marka burushka cadayga ee caadiga ah la isticmaalayo oo kale. Kala tasho dhakhtarka ilkaha ama ilko-nadiifiye burushyada cadayga ee ugu habboon.
Xiitaa dunta ilkaha iyo findhicilka waa loo baahanyey
Sidoo kale waa ay fiicantahay in maalintiiba hal mar ilkaha lagu nadiifiyo dunta-ilkaha, findhicilka ilkaha, ama burushka ilkaha dhexdooda loogu talogalay. Waxa habboon in taas la yeelo cadayashada ka hor haddii la rabo in nadiifinta oo dhan isku mar la is raaciyo.